१७ बर्षिया मेनुका कालिगण्डकीमा मृत फेला
प्रेम सुनार बुटवल । १३ दिन अघि घरबाट बेपत्ता भएकी गुल्मीको पुर्तिघाट स्थित जिवन उद्धार माध्यामिक विद्यालयकी विद्याथी १७ बर्षिया मेनुका श्रेष्ठ कालिगण्डकी नदीको मिर्मि ड्याम्ममा मृत फेला परेकी छन । पर्वतको बिहादी गाउँपालिका वडा नम्वर ३ रानीपानीकी श्रेष्ठ मंसिर ९ गते देखि घरबाट बेपत्ता भएकी थिईन । श्रेष्ठको मिर्मि ड्याममा सडेगलेको अवस्थामा शव फेला परेको सो वडाका वडाध्यक्ष रणबहादुर ओलीले जानकारी दिए । मिर्मिमा होटल व्यवसाय गर्दै आएका रतन कुँवरले शुक्रबार...
१६ दिने अभियान: देवरले गरे भाउजुलाई कुटपिट
बुटवल । कपिलवस्तुमा शुक्रवार लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको कार्यक्रम एक विद्यालयमा भई रहेको नजिकै एक युवाले आफ्नी भाउजुलाई घरयासी झगडाका क्रममा चिर्पटो प्रहार गरी गम्भीर घाईते बनाएका छन। जिल्लाको देवप्रताव माविमा १६ दिने अभियानको जनचेतनामुलक कार्यक्रम भई रहँदा शिवराज नगरपालिका–६ का २६ बर्षिय अलि अहमतले २६ बर्षिया भाउजु नजिमा खातुनलाई चिर्पटो प्रहार गरी गम्भीर घाईते बनाएका हुन । स्थानिय अस्पतालमा उपचार हुन नसकी घाईतेलाई थप उपचारका लागि बुटवल पठाईएको...
सफल माहुरी उद्यमी बने बिष्णु
लिलाधर वली दाङ । २०५५ सालमा चितवनबाट माहुरी चरणका लागि दाङ आएका विष्णुराज श्रेष्ठ जिल्लामा सफल माहुरी उद्यमी बनेका छन् । चितवनमा उनका बुवाले पनि माहुरी पालन व्यवसाय गरेका थिए । त्यसपछि एकै स्थानमा बाबु–छोराले एकै पेशा के गर्नु भनेर दाङ आएका थिए । दाङ आउँदा केही माहुरीका गोला लिएर आएका थिए । त्यही व्यवसायलाई निरन्तर दिँदै जाँदा अहिले उनी सफल उद्यमी बन्न सफल भएका छन् । अहिले उनले १ सय...
वडा अध्यक्ष विष्टको निधन
राधिका भुसाल प्युठान । प्युठान नगरपालिका –२ का वडा अध्यक्ष खिम बहादुर विष्टको निधन भएको छ । विष्टको ५८ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । विगत १ वर्षदेखी फोक्सोको क्यान्सरबाट पिडित विष्टको शुक्रबार उपचारको लागि चितवन लैजादै गर्दा बाटोमा निधन भएको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । शुक्रबार दिउसो निधन भएका विष्टको शवलाई घरपरिवार सम्म ल्याउदै गरिएको परिवारले जनाएको छ । विष्टको सम्झनामा प्युठान नगरपालिकाले शनिवार श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने भएको छ । विष्ट...
गाउँमा बस पुगेपछि स्थानीय खुशि
पाल्पा । पाल्पाको पूर्वी क्षेत्रस्थित विकट निस्दी गाउँपालिका–१ बाकामलाङमा पहिलो पटक बस पुगेपछि स्थानीयबासी खुशी भएका छन् । रामपुर यातायात व्यवसायी समितिमार्फत लु५अ ५७९९ नं. को बस पहिलो पटक गाउँमा पुगेको हो । गाउँमा बस पुगेपछि यहाँका बासिन्दाले बस चालक र यातायात व्यवसायी समितिका पदाधिकारीलाई स्वागत गर्नाका साथै स्थानीय आमा समूहले खुशीयालीमा झाँकीसमेत देखाएका थिए । गाउँमा पहिलो पटक बस भित्रिदा निकै रमाइलो लागेको स्थानीयवासी तुकबहादुर सोतीले बताए । पाल्पाको रामपुर...
बाँके । बाँकेको कोहलपुरमा विद्युत् विस्तार योजना सञ्चालन भएको छ । आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र नगर विकास समिति कोहलपुरले विद्युत् विस्तार गर्न लागेको हो । व्यवस्थित विद्युतीकरण योजना झण्डै ३४ वर्षपछि नगर क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा आएको छ । विद्युत् विस्तारका लागि रु दुई करोड २५ लाख छुट्याइएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष अवराज खड्काले जानकारी दिए । विद्युत् विस्तार योजना नगर विकास समिति कोहलपुर र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त प्रयासबाट सञ्चालन गरिएको हो । नगर विकास समितिका...
मानव अधिकारको अवस्था आशालाग्दो भएन: इन्सेक
नेपालगञ्ज । प्रदेश नं ५ मा मानव अधिकारको अवस्था आशालाग्दो नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ । इन्सेकले नेपालगञ्जमा गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागीले समाजमा हिंसा, अराजकता, दण्डहिनताको अवस्था विद्यमान भएकाले मानव अधिकारकर्मीले नयाँ ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने सुझावसहित यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, कानून व्यवसायी, महिला अधिकारकर्मी, द्धन्दपीडितको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा अधिकारवादी संस्थाले मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसअवसरमा इन्सेकका केन्द्रीय अध्यक्ष डा इन्दिरा...
दुई युवा समुह बिच हातपात
सिर्जना घिमिरे पाल्पा । पाल्पाको रामपुरमा आज दुई युवा समुह बिच भनाभन हुँदाहुदै भएको हातपातका कारण दुईजना युवा घाइते भएका छन् । रामपुर नगरपालिका वडा नं. ४ का ३२ वर्षीय शाहदत हुसेन र रामपुर ४ कै ३९ वर्षीय समसुल हक मिँया घाइते भएका हुन । गम्भिर घाइते भएका मिँयालाई केहिबेर अघि काठमाडौँ रिफर गरिएको छ । सामान्य कुराकानी गर्दागर्दै विवाद उत्पन्न भएर हातपात हुदाँ घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरका प्रहरी...
संसदीय मामिला पत्रकार प्रदेश पाँचमा नयाँ नेतृत्व
बुटवल । संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेश नम्बर पाँच गठन भएको छ । शुक्रबार बुटवलमा भएको प्रथम अधिवेशनले विष्णु प्रसाद घिमिरे (नयाँ पत्रिका) को अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो । उपाध्यक्षमा अमृता अनमोल (कान्तिपुर), महासचिव सीपी खनाल (दैनिक पत्र), सचिव ओम पंगेनी (दैनिक लुम्बिनी) र कोषाध्यक्षमा लक्ष्मण पोखरेल (अन्नपूर्ण पोष्ट) रहेका छन् । त्यस्तैगरी टोपराज शर्मा (अनलाइन खबर) प्रकाश आचार्य (मेचीकाली दैनिक), विनोद परियार (नागरिक), मिलन गाहा...
हाइस नास्ता पसलमा पसेपछि..
लिलाधर वली दाङ । शुक्रबार विहानै दाङबाट काठमाण्डौका लागि ११ जना यात्रु लिएर छुटेको बा ३ ख ८५९३ नम्बरको हाइस देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ५ कमलरोड सिसहनियाँको एक पसलमा पसेको छ । गाडीको स्ट्रेरिङ फेल भएर अनेन्त्रीत हुँदा हाइस नास्ता पसलमा पसेको हो । उक्त दुर्घटनामा मानवीय क्षति नभएको सिसहनियाँ प्रहरी इन्चार्ज गिरिराज पोख्रेलले जानकारी दिए । गाडिको स्टेरिङ्ग फेल भएर सडक किनारमा रहेको मंगलप्रसाद चौधरीको नास्ता पसलमा पस्दा पसलमा करिब...
« Previous 1 … 229 230 231 232 233 … 374 Next »